Ukraine: Wariye Qarax Lagu Diley
Wariye caan ahaa ayaa Arbacadii qarax gaari lagu dilay magaalada Kyiv ee caasimadda Ukraine.
Warbaahinta Ukraine ayaa warisay in 44 jirkan oo la oran jirey Pavel Sheremet, uu ahaa wariye u shaqeynayay mid ka mid ah websiteyada ugu weyn ee dalkaasi Ukraine ee Ukrainska Pravda.
Sheremet, ayaa dhintay markii qarax gaarigiisa lagu xirey uu kula qaraxay xilli uu ku sii jeeday shaqadiisa. Muuqaallo laga heley qaraxa, ayaa muujinayay in gaariga ay daaqadaha afarta ahi furmeen markii uu qaraxa qabsaday gaariga kadib.
Madaxa booliska ee dalkaasi Khatia Dekanoidze, ayaa sheegay in ay baarayaan dilkaasi wariyaha, waxana uu ka dhawaajiyay in loo adeegsaday weerarka waxyaabo qarxa oo culeeskoodu uu gaarayo inta u dhaxeysa 400 illaa iyo 600 gram.
Afhayeen u hadlay aqalka Cad, John Kirbay, ayaa sheegay in Sheremet uu door muhiim ahi ka cayaaray dimuqraaddiyadda Ukraine,waxana uu soo warin jirey warbixinnada ku saabsan musuqmaasuqa iyo dowladnimada.
FBI-da Mareykanka, ayaa u xaqiijisay VOA qeybteeda Ukraine la hadasha inay caawimaad ka geysanayaan baaritaannada ku aaddan dilka wariyahaasi.